Ndi Golden Retriever Chow mix nkịta na-eme ihe ike? - Reeddịrị
A makwaara dị ka Onyinye Chowtriever , Ngwakọta Chow Golden Retriever Chow bụ otu n'ime ihe bara nnukwu uru nke ụwa crossbreeding. Ọ bụ otu n'ime nkịta na-enweghị ntụpọ, nkịta kachasị mma ị ga-ahụ.
Gụọ na ịchọta ihe niile dị mkpa gbasara ngwakọ a, yana ma ọ ga-adị mma maka ezinụlọ gị na ibi ndụ gị.
Ebee ka Golden Retriever Chow Mix si abịa?
Kedu ihe Golden Chowtriever dị?
Na-elekọta a Golden Retriever Chow mix
Ahụike: Ogologo oge ole ka Golden Retriever Chow mix na-adị ndụ?
Goldenchọta Golden Retriever Chow mix puppy maka ọrịre
Uzo di iche iche dika ihe ndi ozo
Mkpebi ahụ: Shouldkwesịrị ịnweta ngwugwu Golden Retriever Chow?
Dị ka ọ bụla na nkịta na-emepụta ihe, amabeghị mmalite nke Golden Retriever Chow mix.
N'oge ụfọdụ n'ime afọ 20 gara aga, ndị mmadụ kpebiri ịgwakọta Golden Retriever na Chow Chow, nke rụpụtara Golden Chowtriever - nke na-eme ihe ike ma na-ahụ n'anya.
Iji ghọta nke ọma crossbreed a, anyị nwere ike ịmụtakwu gbasara àgwà ọ ga-enweta site na nne na nna ya.
Zute Ọlaedo Ọlaedo
Ntughari ọla edo bred dị ka nkịta ịchụ nta na etiti 19th Scotland. Ha di oke nma na ichota mmiri mmiri n'emebighi egwuregwu ahu, n'ihi onu ha di nro, nke mere ha onye kachasi nma maka otutu ndi dinta.
Ka oge na-aga ma ha amalite, a malitere ile Golden anya dị ka ndị ezinụlọ ya ma bụrụ ndị ama ama na England.
Ọsọ ọsọ rue taa, Goldens ejiriwo oké ifufe merie ụwa. Omume ha na-apụ apụ, na-egwu egwuregwu, nyere aka mee ha nke atọ kachasị ewu ewu na US, na ụwa ndị ọzọ.
Ma, nkịta a na-enye ụbụrụ yana ụbụrụ. N'ịbụ ndị dịgasị iche iche, a na-ejikwa ha dị ka nkịta nwere nkwarụ maka ndị ìsì & ndị ntị chiri, nyocha na nnapụta, na nkịta nchọpụta.
Ọbụna ha dị ka nke anọ kachasị nwee nkịta n'ụwa - n'akụkụ azụ Border Collie, Poodle, na German Shepherd. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na a na-eji ụdị a enyere ụmụ mmadụ aka ibi ndụ ka mma.
Enwere ike ịchọta nke a dị ọcha n'ụdị atọ dị iche iche: Onye America , Onye Canada , na Bekee Ntughari ọla edo.
Dabere na onye ọrụ AKC izu ụkpụrụ , sɛnkyerɛnne kwan so wura (Golden Retriever) no mu duru yɛ nkaribo 21.5 kosi 24 (anaa 55 kosi 61) na ne tenten yɛ anammɔn 55 kosi 75 (25 kosi 34).
Ha bụ ndị enyi kwesịrị ntụkwasị obi nke na-enwe afọ ojuju afọ 10 ruo 12.
Zute Chow Chow
Na Chow Chow sitere n'ebe ugwu China ma bụrụ otu n'ime ụdị nkịta kacha ochie n'ụwa, malitere na 2000 afọ gara aga.
Emepụtara ụdị fluffy a ka ndị enyi maka ndị isi China , na ụfọdụ usoro ndị eze nwere ihe karịrị 2000 Chow Chows na oge ọ bụla. Azụkwara ha maka ịchụ nta na ike ha.
Abịa n’ọdịdị ahụ ya, ihe niile ị chọrọ ịma n’aha ya. Aha izizi ya bu Sonshi-Quan , nke sụgharịrị ịbụ “nkịta na-akpa nkịta ọhịa.” Ha nwere ulo siri ike, okpokoro isi sara mbara, na obere ntị nwere akụkụ atọ.
The nkezi elu nke otu Okenye dị sentimita iri na asaa ruo iri abụọ (iri anọ na atọ ruo iri atọ na atọ), ọ dịkwa kilogram iri na anọ ruo iri asatọ (kilogram 18 ruo 41)
Chows nwere akwa nkpuru nkpuchi nke nwere nkpuchi di uku n’olu. Sildị ajị anụ ya dị nro na-abịa n'ụdị dịgasị iche - site na uhie ruo na oji - mana a na-ahụta ọtụtụ agba na mpụga ụdị ọkọlọtọ.
Ewezuga ịbụ ndị na-ebupụta oge, ha anaghị arụsi ọrụ ike, nke mere ka ha bụrụ nhọrọ magburu onwe ya maka ezinụlọ ndị bi na ụlọ.
Bredị a na-ahụ n'anya abụghị otu iji bulie ọgụ ma ọ bụ na-akpa àgwà ka ọ na-ahọrọ ịbụ ndina ndina ma na-ehi ụra ụbọchị niile.
Ha nwere ndụ dịtụ ogologo karịa - afọ 11 ruo 13.
N'adịghị ka nne na nna ya dị ọcha, Chow Chow Golden Retriever mix adịghị amata site n'aka American Kennel Club (AKC). Mana enwere nzukọ maka nkịta ndị na-emepụta ihe na-amata ngwakọ a, dị ka Dog Registry of America, Inc. (DRA).
Onweghi onodu kwesiri ka enwe ike igwota ihe ndi ozo, ma n’ozuzu ha, ihe ndi Golden Retriever Chow gha eme gi nma. anya gbara ọchịchịrị na ntị dara .
Nwere ike ịtụ anya snout dị ọkara-ogologo ya na imi ojii nke zuru oke maka vidiyo boop ma ọ bụ eserese! Mgbe ahụ na njedebe nke ahụ ha, ọ bụ ọdụ dị ntakịrị curved ma puffy.
Ebe ọ bụ na obe juru na ịtụnanya, fido a nwere ike nwee agba asụsụ pụrụ iche nke Chow. Ọ nwere ike ịbụ otu ụkpụrụ ojii na acha anụnụ anụnụ ahụ, ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ pink nwere ntụpọ gbara ọchịchịrị.
Lelee vidio a nke ngwakọta Golden Retriever Chow aha ya bụ Bizkit na-ekpori ndụ ụbọchị ụsọ mmiri! Ọ bụrụ na i leruo anya nke ọma, ị ga-ahụrịrị ntụpọ gbara ọchịchịrị na ire ya:
Kedu otu nnukwu ngwakọta Golden Retriever Chow si enweta?
Golden Chow’s nwere ike ibu ezigbo ibu ma n’ibu ma ibu ma ewere ya dị ka nkịta na-ebu ibu. Ha nwere ike iru ruru 25 sentimita asatọ (63.5 cm) n'ịdị elu ma tụọ n'etiti 50 na 75 pound (23 na 34 n'arọ).
Yabụ ọ bụrụ na ibi na ogige dị na obodo ma ọ bụ ụlọ, ọ kachasị mma ịchọ obere ụdị. Canines ndị a dị mma maka ụlọ nwere ike inye ohere zuru oke, ma n'ime ụlọ ma n'èzí.
Uwe na agba: Ndi ha bụ hypoallergenic?
Mba, ha abụghị. A na-ahụta ngwakọta Golden Retriever Chow mixs dị arọ dị ka afọ n’afọ.
Ha nwee akwa mkpuchi abụọ, nke nwere mmiri, na mmiri na-enweghị mmiri , ma ha nwere ike keta ihe dị ukwuu nke Golden puffier, nke ga-eme ka ha nwekwuo ọfụma.
Otu ihe a kwadoro bụ agba nke uwe ya. Enwere ike ịchọta ngwakọta Golden Chow na agba siri ike dịka ọla edo , oji , aja aja , net , na acha anụnụ anụnụ .
A maghị ndị nne na nna na-eme ihe ike, mana enwere nnukwu ọdịiche n'etiti mmụọ ha abụọ. Ndị na-ewepụta ọla edo bụ goofballs na-atọ ụtọ bụ ndị na-eme ihe na-atọ nna ha ukwu ụtọ, ebe Chows nwekwuru nnwere onwe ma nwee isi ike.
Typicaldị Chowtriever bụ onye na-ahụ n'anya, onye na-egwu egwuregwu, na onye nwere mmekọrịta enyi. Ọ na-amasị ha ịnọnyere ezinụlọ ha, mana nwere ike na-enyo ndị bịara abịa enyo . Site na mmekorita nke ọma, ọ ga-egosi akụkụ ya dị mma.
Anyị nwere ike ịtụ anya na ha ga-echekwa karịa n'ihi na a na-azụ akụkọ ihe mere eme ha dị ka nkịta na-eche nche.
Ga-ahụkwa n'anya na Golden Chows nwere ọgụgụ isi ma dịkwa mfe ịzụ.
Mana n'ihi okike & isi ike nke Chow Chow, anyị na-akwado a pooch ka ahụmahụ nwe ndị maara otu esi eji mmesi obi ike, ndidi, na na-emeso n'oge ọzụzụ.
Ngwakọ a nwere ike ịdị mma na ụmụaka mana na-ahụ maka egwuregwu mgbe niile. Ọ bụrụ na ọ dị ha ka egwu ha ma ọ bụ na ejighị ha, ngwakọta Chow Golden nwere ike ịbọ na mmegwara .
Ọ bụrụ na ị nwere ezinụlọ nwere ụmụ ntakịrị, chee echiche ugboro abụọ tupu ị webata ngwakọ a. Ha nwere ike ịdịkwu mma maka ezinụlọ nwere ụmụaka toro eto.
N'ihe banyere nkịta ndị ọzọ, ọ ga-abụ na ha ga-egosi ihe ike nke iwe ma ọ bụrụ na ị webatara anụ ụlọ ọzọ n'ezinụlọ gị ozugbo.
Zere nke a site na ijide n'aka na anụ ụlọ gị na-enweta ọzụzụ nrubeisi kwesịrị ekwesị, wee jiri nwayọ iwebata ma kpakọrịta Golden Retriever Chow mix na gburugburu ebe a na-achịkwa.
Yabụ, belụsọ ma enyi gị canine nwere ihe ndekọ gosipụtara nke ịbụ enyi na nkịta ndị ọzọ, ịnwe anụ ụlọ ọzọ anaghị atụ aro.
Nke a mmebe nkịta na-achọ ọ dịkarịa ala mmega ahụ 60 nkeji . Mmetụta anụ ahụ na nke uche na-agakọkarị, mana ndị nwere ngwakọ a kwuru na ha bụ na-emeghachi omume n'ịga n'ihu karịa ime ihe n'uche .
Zute Simba, ngwakọta Golden Retriever Chow
Nke ahụ apụtaghị na ị gaferefe Golden Retriever Chow mix naanị maka na ọ na-arụ ọrụ karịa.
Site na nha ha, ha ka na-enwe oke ibu, yabụ nye anụ ụlọ gị a elu protein na abụba nri na obere carbohydrates .
Nye Golden Chowtriever gị 3 iko nke nkịta nri kewara n'ime nri atọ n'ụbọchị . Akọrọ kibbles abụghị naanị nhọrọ dị mma, mana ọ nwekwara usoro nri na-edozi ahụ. I nwekwara ike zụọ ụfọdụ furbaby gị akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi .
Etu esi edozi a Golden Retriever Chow mix?
Dị ka anyị kwurula na mbụ, obe a bụ ezigbo onye awụsịrị awara awara ma chọọ nhịahụ kwa ụbọchị. E wezụga nke ahụ, enwere ike ịme oge iji kwa ọnwa ma ọ bụ abụọ.
Na-atụ anya karịa ntutu ma kwadebe ya na a ahịhịa ahịhịa , greyhound mbo , na a zaa maka ịwụfu oge, n'agbanyeghị.
Enwekwara nlekọta ezé ebe ịchọrọ ịkwasa ezé gị na anụ ezé 2 ruo 3 ugboro n'izu. Tartar ìgwè a pooch pụrụ iduga chịngọm mbufụt na ọrịa.
Mee nyocha kwa izu nke ntị gị Golden Chowtriever ma hichaa ya na bọọlụ owu na ihe nhicha ntị maka nkịta. Na maka mbọ ahụ, belata ya kwa izu abụọ ma ọ bụ atọ iji zere ogologo mbọ iji deformị ụkwụ gị na anụ ụlọ na emerụ akwara ya .
Otu n'ime ihe kpatara kpatara ịzụlite obe bụ iji mepụta nkịta ka mma karịa nne na nna ya dị ọcha, a makwaara dị ka ngwakọ ngwakọ .
Ọ bụ ezie na a na-ewere ngwakọta Chow Chow Golden Retriever dị ka ụdị siri ike na a afọ ndụ nke 10 ruo afọ 14 , ọ ka nwere ike ịrịa ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa, dị ka hip dysplasia .
Ọtụtụ vets na-atụ aro mgbakwunye glucosamine maka nkịta ndị nwere ike inwe nsogbu nkwonkwo iji belata nkwesi ike na ọzịza na nkwonkwo ha.
N'ihi akwa uwe ya, nkịta a nwere ike ịnwe nfụkasị nke fleas kpatara . Ọ dịghị mkpa nrụgide ebe ọ bụ na e nwere ihe mgbochi na mgbochi olu iji nyere aka ịlụ ọgụ nke akpịrị.
Mgbe ahụ nwekwara elu mmiri , hypothyroidism , entropion , na ectropion .
Maka ozi ọma banyere ahụike nkịta a, ndị na-azụ ihe nke ọma mepụtara Golden Retriever Chow na-agwakọta obere nsogbu akụkụ okuku ume, nke bụ otu n'ime nchegbu ya na nne ma ọ bụ nna Chow Chow.
Izute Athena, Golden Retriever Chow mix nwa nkita
N'oge a, ọ dị nnọọ mfe ịchọta ma zụta ụmụ nkịta na ntanetị, mana ndụmọdụ anyị bụ Nanị ịzụta ihe n'aka ndị na-azụ anụ a ma ama.
Ọchịchị ọla edo (enweghị ntaramahụhụ) mgbe ị na-enweta nkịta jụọ ndị nne na nna na akwụkwọ ọgwụ ha .
Ndị na-eme ihe ngosi a ma ama ga-enwe ike inye gị akwụkwọ ndekọ ahụike ha, yana akwụkwọ ọ bụla ọzọ gbasara ngwaahịa ozuzu ha na usoro ọmụmụ ’.
Y’oburu na ichoro ihe nghacha nke oma nke Golden Cohi, onye obula ghari iwe ya $ 500 . N'ezie, ọnụahịa ahụ nwere ike ịdịgasị iche dabere na nkịta puppy, ogo nne na nna, ebe a na-azụ ya, wdg.
Goldies nwere ike ịnwe ụmụ nkịta 4 ruo 12, na Chows nwere ike inwe ụmụ ọhụrụ 4 ruo 6. Yabụ, anyị nwere ike ikwu n'enweghị nsogbu na crossbreed a nwere ike ị ga-enwe oke mkpụmkpụ n'ime oke ahụ .
Golden Retriever Chow mix breeders & nnapụta
Ngwakọta Golden Chow abụghị nkịta na-ewu ewu kachasị ewu ewu, ma ugbu a, anyị enweghị ike ịchọta ndị na-azụ azụ ọkachamara na -emepụta ngwakọta a.
Ọzọ nhọrọ bụ doro. Ewezuga Golden Chowtriever, ị nwere ike lelee saịtị nnapụta ndị a na-enye Chow Chow crossbreeds, na Golden Retriever mixes na-achọ ụlọ ọhụrụ, ịhụnanya:
Neuse River Golden Retriever Nnapụta (Raleigh, NC)
Njikọ Houston Chow Chow (Houston, TX)
Washington Chow Chow Nnapụta (California)
Laylọ Anụmanụ nke Clay County (Flora, IL)
Nnapụta Anụmanụ Na-agagharị (Mechanicsburg, PA)
N'ihi na ewu ewu na Golden Retrievers na Chow Chows, ha ejirila ọtụtụ ndị ọzọ dị ọcha na-agafe.
Ndị a bụ ngwakọta Chow Chow na ngwakọ ngwakọ ọla edo nwere ike ịmasị.
The Chow Chow Husky mix
Zute Luna, Chow Chow Husky mix
Nke a na-ajụ-sized Chow Chow Husky mix jikwa aha nke Chusky ma ọ bụ Chowski .
Ha dị oke nke na-egwuri egwu, enyi na enyi, yana mgbakwunye dị mma ezinụlọ ọ bụla , ọbụna onye nwere obere ụmụaka.
Chusky sitere n'ahịrị nke nne na nna na-arụsi ọrụ ike. Ha kwesịrị ịga ije ma ọ dịkarịa ala ugboro atọ n'ụbọchị, na mgbakwunye na oge ha na nkịta ndị ọzọ na-egwuri egwu.
N'ihi ọrụ ha chọrọ, ụdị a adịghị mma ibi n'ụlọ.
Ngwakọta Chow Chow Labrador
Kpoo ngwakọta Chow Chow Labrador
Akpọkwara Labrachow , Clọ nyocha Chow mix bụ ngwakọ nke ga-enwe agwa na-apụ apụ dị ka Labrador Retrievers, ma ọ bụ enwere ike idobe ya na omume ihere dị ka Chow Chows.
Na Labrachow si kootu nwere ike ịbụ nsogbu , ka ha si ketara eketa oke aji nke Chow. N’ọnọdụ ndị ahụ, naanị otu ụzọ a ga-esi mee ka ọ ghara ịna-echegbu onwe ya bụ ịsacha ntutu ya ugboro atọ n’izu.
The Golden Retriever Husky agwakọta
Zute Kai, Ngwakọta nke Golden Retriever Husky
Golden Retriever Husky na-agwakọta , a makwaara dị ka Ndị Goberi , bụ ndị nkịta na-ahụ n'anya na ndị nwere ọgụgụ isi.
N'adịghị ka Goldie, ngwakọ a na-eme maka a ezigbo nkịta na-eche nche . Ọ bụrụ na onye bịara abịa abịa, ọ ga-ejide n'aka na ị ga-agwa gị ma ọ bụ site na ịkwa ụja ma ọ bụ iti mkpu . Otú ọ dị, nke a anaghị ewepụ mmekọrịta ha, ebe ọ bụ na ha hụrụ n'anya ịnọ n'etiti ndị maara nke ọma.
Na nne na nna na-arụsi ọrụ ike, canine a chọrọ ọtụtụ mmega - ihe dị ka elekere elekere elekere anya abụọ site na njem ije elekere abụọ ruo atọ.
Kpoo Golden Retriever Chow mix - Isi ihe onyonyo
Ngwakọta Chow Golden Retriever Chow nwere ike ịbụ nkịta mara mma, mana ha chọrọ ndị nwe nkịta nwere ahụmahụ bụ ndị nwere ike ịnagide isi ike ha na ọdịdị egwu.
Tupu ị nweta ụdị a agwakọtara, tụlee eziokwu ahụ na ha anaghị ebikọ ọnụ nke ọma na obere ụmụaka na anụ ụlọ ndị ọzọ, a makwaara ha ịwụfu oke oke.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịnye ụdị ụlọ na oge nke fido a chọrọ, nke a nwere ike ịbụ nkịta maka gị.
Ì chere na ị nwere ihe ọ ga - ewe iji lekọta Golden Retriever Chow Mix? Ma ọ bụ ma eleghị anya ị nwereworị otu n'ime ndị a furry ibe? Mee ka anyị mara na ngalaba nkọwa dị n'okpuru!
Old English Sheepdog: Nwere ike ị hụrụ n'anya nkịta nwere ike ime ihe ike?
ụmụ nkịta ụlọ nyocha na ndị ọzụzụ atụrụ German
siberian husky pomeranian mix zuru oke
ụmụ nkịta ụlọ nyocha chocolate mix
aha nwa nkita pitbull maka ụmụ nwanyị